दशै‌मा घर जानेहरुका लागि यातायात विभागको यस्तो छ अाग्रह ! - Everest Dainik - News from Nepal
दशै‌मा घर जानेहरुका लागि यातायात विभागको यस्तो छ अाग्रह !
काठमाडौं, असोज १२ । यातायात व्यवसायीले गाडी नथप्ने र यातायात व्यवस्था विभागले पनि वैकल्पिक व्यवस्था नमिलाउने भएपछि दशैंमा यात्रामा समस्या हुने भएको छ ।
विभागले नै दशैंमा गाडी अभाव हुने संकेत गरेको हो । विभागका सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले फूलपाती पछि बढ्ने यात्रुको चाप थेग्न समस्या पर्ने बताएका छन् । उनले फूलपाती कुर्दा टिकट पाउन समस्या हुन सक्ने हुँदा मिलेसम्म फूलपातीअघि नै घर जान यात्रुलाई आग्रह गरेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस बस टिकट काउन्टरमा कार्यरत कर्मचारीलाई अनिवार्य पोशाक
‘फुर्सद हुनेहरू पहिले गइदियो भने पछिलाई चाप कम हुन्छ, सहजरूपमा जान पनि पाउन सकिन्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘अध्ययन–अध्यापन गर्ने–गराउनेको छिटो छुट्टी हुने भएकाले चाँडो घर गइदिन हाम्रो अनुरोध छ ।’ यो वर्ष दशैंका लागि नयाँ बस नथपिने उनले बताए । सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरेपछि असन्तुष्ट व्यवसायीले नयाँ गाडी नथपेका हुन् । यसअघि विभागले व्यवसायीले नयाँ बस नथपे विद्यालयका बस चलाएर भएपनि यात्रुलाई सुविधा दिने बताएको थियो । तर, अहिले उनले यो प्रयास सफल हुन नसकेको बताए ।
अहिले अब नयाँ गाडी थप्न सक्ने अवस्था छैन । तर, हामी भएकै गाडी चलाएर यात्रु ओसार्छौँ । दिउँसो यात्रु बोकेर गएका गाडी राति नै फर्किन्छन् र भोलिपल्ट फेरि यात्रु बोकेर जान्छन् । राति यात्रु लिएर छुटेका बस पनि दिउँसो नै फर्किन्छन् र फेरि बोक्छन् । नयाँपत्रिकाबाट